अस्पतालमा स्क्रब टाइफस संक्रमणका बिरामी भर्ना | Nagarik News - Nepal Republic Media
अस्पतालमा स्क्रब टाइफस संक्रमणका बिरामी भर्ना
तीन दिनअघि धादिङ बेनीघाटकी १७ वर्षीया सीता हटुवाल महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल भर्ना हुन आइन् । दुई हप्ता दिनदेखि उनी बिरामी पर्न थालेकी थिइन्।
पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण सुरुमा देखिए । यो समस्या गत साता चरम बन्दै गयो । कडा ज्वरो आउने, खाना नरुच्ने भएपछि उनलाई धादिङ गजुरीकै एक अस्पतालमा भर्ना गरियो । त्यहाँ उनको तीन दिनसम्म उपचार भयो । त्यसपछि पनि निको हुन नसकेपछि असार ३१ गते उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल पु¥याइएको हो ।
एकै पटक धेरैवटा समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पतालको मेडिकल आइसियुमा भर्ना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सकले सीताको शरीरमा दाग देखेपछि उनको रगत परीक्षण गरियो । परीक्षणबाट स्क्रब टाइफस भएको पत्ता लाग्यो ।
उनलाई पेट दुखेपछि सुरुमा ग्याष्ट्रिकको आशंकामा ग्याष्ट्रोलोजी विभागले उपचार गरेको थियो । स्क्रब टाइफसको कारण उनको फोक्सो, कलेजो लगायतमा संक्रमण भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । त्यसै कारण मेडिकल आइसियुमा भर्ना गरिएको डा. पे्रम खड्गाले बताए । तीन दिनसम्म आइसियुको उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘गजुरीमा जण्डिस भएको भनेको थियो । यहाँ मिर्गौलामा पनि असर गरेको डाक्टरले भनेका छन् ।’ सीताका बुवा लिलानाथ हटुवालले बिहिवार नागरिकसँग भने । हटुवालले टोलमा अरुलाई पनि यस्तै समस्या भएपछि उपचारका लागि अस्पताल धाइरहेको बताए ।
तीन दिनअघि मात्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका सिन्धुपाल्चोकका एक बिरामी उपचार गरी डिस्चार्ज भएका छन् ।
अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कतिपय बिरामी बहिरंग विभागबाटै उपचार गरेर फर्केका छन् । उनीहरू सबै यो अस्पताल नपुगे पनि अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा छरिएर उपचार भएको हुनसक्ने उनले बताए । मनसुनमै सक्रिय हुने यो रोगको जोखिम राजधानीसहित राजधानी नजिकका अन्य जिल्ला पनि रहेको डा. पुनले बताए । ‘असारको अन्तिम सातादेखि यी बिरामी देखिन सुरु भएको छ । साउन महिनाभरि पनि यसको जोखिम कायमै छ ।’ उनले भने ।
खेतबारीको झाडीमा मुसाको रगत चुसेर जिउने ‘माइट’ नामक परजीविको माध्यमबाट मानिसमा सर्ने रोगलाई स्क्रब टाइफस भनिन्छ । झाडीहरूमा रहने यो परजीविभित्र हुने ‘ओरेन्सिया सुसुगामोसी ’ नामक जिवाणु मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गरेमा व्यक्तिमा यो रोगको संक्रमण हुन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार यो रोगको संक्रमण भएपछि कतिपयको शररिमा रातो बिबिरा देखिन्छ भने कतिपयमा नदेखिन पनि सक्छ । स्क्रब टाइफसको जीवाणुले छोएको पाँचदेखि ६ दिनमा व्यक्तिलाई कडा ज्वरो आउने, पसिना आउने, कामज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, कतिपयलाई शरीरमा रातो बिबिरा देखिने, ग्रन्थी सुन्निने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यसको संक्रमण भएका व्यक्तिले समयमै उपचार नगरेमा कलेजो, मिर्गौला, फोक्सो, मुटुलगायत अङ्गहरूमा समेत संक्रमण गराई बिरामीको मृत्युसमेत हुने चिकित्सक बताउँछन् । ‘यसको खतरा भनेकै छिट्टै अन्य अङ्गमा पनि संक्रमण गराउँछ ।’ डा. पुनले भने।
चिकित्सकका अनुसार बितेका वर्षहरूमा देशका विभिन्न जिल्लामा यसको संक्रमण फैलिएको थियो । यो वर्ष अन्य जिल्लामा पनि यसको जोखिम छ । यो रोेग लागेपछि शरीरका कलेजो, मुटु, मिर्गौला, फोक्सोजस्ता भागहरूमा गई संक्रमण गर्ने हुनाले स्क्रब टाइफस संक्रमणलाई गम्भीर रुपमा लिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
स्क्रब टाइफसको कारण विगतका वर्षहरूमा पनि दर्जनौं बिरामीको ज्यान गइसकेकाले कडा ज्वरो आउने र ग्रन्थी सुन्निने जस्ता लक्षण देखिएमा छिटो उपचारमा जान चिकित्सकले सुझाएका छन् । ‘समयमै उपचार नभएमा विभिन्न अङ्ग फेल भएर मृत्युसमेत हुने गरेको देखिन्छ,’डा.पुनले भने । जतिसक्दो चाँडो उपचारमा जानु नै यसबाट बच्ने उपाय भएको डा. पुनको सुझाव छ । योबाहेक लाग्नै नदिनको लागि झाडीमा खाली खुट्टा, हात लिएर बस्न नहुने र घर वरिपरिको वातावरण सफा राख्न उनको सुझाव छ ।
–कडा ज्वरो आउनु ,
–शरीरमा रातो बिबिरा देखिन सक्ने
–झाडीमा सिधै सुत्ने या बस्ने नगर्ने
–बसिहाल्नु परेमा केही ओच्छयाएर मात्र बस्ने
–खेतबारीमा जाँदा पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउने
–खुट्टामा लामो बुट लगाउने
–घर तथा वरिपरिको वातावरण सफा राख्ने
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७५ ०८:३९ शनिबार